Turkiga oo soo Saaray Taangi uu Jarmalku u diiday. - Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka Turkiga oo soo Saaray Taangi uu Jarmalku u diiday.
Turkiga oo soo Saaray Taangi uu Jarmalku u diiday.
Previous articleSomaliland oo ruqsadii kala noqotey shirka LAAS Group.
Next articleTaliska Booliska ee magalada Beledweyn ee Gobolka Hiiraan ayaa ka warbixiyay Dil Arxan darro ah oo xalay loogu geystay Magaaladda Baladweyne.